Maitiro ekudzima iyo Shake kuti Undo ficha mu iOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekudzima iyo Shake kuti Undo ficha mu iOS 9
Kana isu tiri kushanda pamberi pekomputa yedu uye chero chikonzero tinoita shanduko iyo gare gare yatisingade, isu tinogara tine mukana wekuenda kuHedha menyu uye nekudzvanya pane Sarudza sarudzo. Iyi sarudzo inowanzo inobatsira zvakanyanya kana isu tichigadzirisa mamwe mameseji kuyedza kuigadzira asi hatina kumuwana. Kumwe kushandiswa kwakakosha kweiri basa kunowanikwa patinenge tichigadzirisa mifananidzo uye tiri kuyedza sarudzo dzakasiyana siyana kuti tione kuti ndeipi inokodzera zvakanyanya zvatiri kunyatsotsvaga. Basa rinobatsira uye rinoshanda.
Pane iyo iPhone isu zvakare tine basa iri, asi kusiyana nechikumbiro, hatigone kuwana chero mhando yemenyu kuti tikwanise kuita sarudzo iyi. Nzira chete yekuiwana ndeyokuzunza chishandiso. Pamusoro pekuve nzira yakanakisa yekuwana, zvinotibvumidza kuti tikurumidze kubvisa chero shanduko dzatisingazivi dzatakaita. Kana isu tichigara tichinyora pane yedu iPhone isu tiri munzira yekuenda kubasa kana kumba, iri basa rakanaka.
Kune rimwe divi, kana mashandisiro atinoita nefoni yedu asina kuitirwa kunyora, ficha iyi yakanyanya kunetsa kupfuura mhinduro. Neraki isu tinogona kuimisa kuti tidzivise kuti pese patinozunza foni kupfuura zvakajairwa, iri basa rinoonekwa pachiratidziri. Mune shanduro dzakapfuura dzeIOS dzaisagona kuremara kunze kwekunge taenda kune tweaks seShakeToUndo.
Bvisa iyo Shake kuti Undo ficha
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuenda kumenu Zvirongwa.
Mukati Zvirongwa isu tichatsvaga iyo sarudzo General.
Iye zvino tinotamira kuzasi kwemenyu kuti tinyore Accessibility.
Pane imwe nguva mukati mekuwanika tinoenda kune sarudzo Shake kuti ubvise uye isu tinofambisa iyo tebhu kuti isamise basa iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekudzima iyo Shake kuti Undo ficha mu iOS 9
Apple patents akawanda-anobata skrini iyo yatisingade kubata
Apple yatove kuyedza mbiri-kamera prototypes